Ny Lianchuang Technology Group dia nanao fivoriana niarahana tamin'ny telovolana fahatelo | Lianchuang
Heater amin'ny sensor amin'ny vatana
Ny marainan'ny 13 Oktobra dia nanao fivoriana niarahana tamin'ny telovolana fahatelo an'ny 2020 tao amin'ny Lianchuang Academy ny Vondrona Teknolojia Lianchuang. Lehiben'ny vondrona Lai Banlai, talen'ny vondrona Zhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, filoha mpanampy Lai Dingquan ary mpitarika hafa, ary koa ireo mpitarika isan-tsokajin'olon-dohan'ny lohan'ny departemanta miasa, lohan'ny orinasam-indostrialy marobe, mpikambana ao amin'ny Komitin'ny fitantanana toekarena, ary lehiben'ny fitantanam-bola sy ny mpiasa an-tsehatra nanatrika ny fivoriana. Ny fivoriana dia notarihin'i Chen Ye, talen'ny vondrona ary mpanampy ny filoha.
Tamin'ny fivoriana, Liu Qinghui, lefitra jeneraly lefitra misahana ny Liantek, Yao Li, mpitantana lefitry ny Lianchuang Electric Appliance Industry Co., Ltd, Wen Hongjun, tale jeneralin'ny Xinliangtian, Xu Jin, mpitantana jeneralin'ny Lianchuang Electromekanika, ary Ning Chuanjiu , lefitra jeneraly lefitra an'ny Lianchuang Sanming, samy nanao ny asany isan-telovolana. tatitra momba ny asa. Ny mpitati-baovao tsirairay avy dia nampiasa andiana antontan-kevitra mazava sy mahavariana, miaraka amin'ny sary sy lahatsoratra handinihana sy hamelabelatra ny fizotran'ny fanatontosana ny telovolana fahatelo, ny fahavitan'ireo asa lehibe dimy amin'ny taona, ary ireo teboka mamiratra sy maizina amin'ny telovolana fahatelo, ary apetraho ny drafitra fanatanterahana ny telovolana fahefatra voalohany. Taorian'izay, Chen Ye, talen'ny vondrona ary mpanampy ny filoha, dia nanambara ny tanjon'ny asa aman-draharahan'ny sampana tsirairay amin'ny 2021, ary nandamina ny ampahefa-potoana fahefatra amin'ny asa olombelona ho an'ny orinasa tsirairay. Ny filoha mpanampy Lai Dingquan dia nanao fandaharana sy fandaminana amin'ny antsipiriany momba ny asa teti-bolan'ny vondrona 2021.
Nandritra ny fihaonana, Wei Weicong, lehiben'ny departemantan'ny IT ao amin'ity vondrona ity, dia nitatitra ny fampiharana ny rafitry ny fampahalalam-baovao ao amin'ilay vondrona sy ny orinasa tsirairay tamin'ny taona 2020. Chen Jiandong, mpanolo-tsaina IT ivelany an'ny vondrona, nizara tranganà fampahalalana tena tsara, ary nanolotra fomba sy fomba hanatsarana ny fitantanana orinasa amin'ny alàlan'ny rafi-panazavana. Initiative.
Ny filoha Lai Banlai dia nanao lahateny famaranana, nanasongadina sy nangataka asa mifandraika amin'izany.
1. Tohizo ny fampiharana sy ny fanamafisana ny fananganana vaovao. Ny vondrona dia nanambola mihoatra ny 20 tapitrisa yuan talohan'izay sy taorian'izay. Ny orinasa rehetra dia tokony hampiroborobo mavitrika ny fitantanana ny vaovao. Ny olona rehetra izay mampiasa rafi-panazavana, manomboka amin'ny ambaratonga avo ka hatramin'ny mpiasa tsotra, dia tsy maintsy manome mari-pahaizana momba ny asa; 2. Orinasa tsirairay avy amin'ny alàlan'ny "latabatra fivarotana telo", hizaha lalina ny fahafahan'ny tsena isaky ny faritra sy ny vokatra tsirairay izahay, ary hivezivezy hamita ireo tondro fandraharahana isan-taona; amin'ny telovolana fahatelo sy fahefatra, ny orinasa tsirairay dia hanao fandaminana amin'ny teti-bolan'ny 2021 sy ny asa lehibe ilaina ho an'ny olombelona; fahefatra, ny vondrona dia nanolotra talenta fitantanana zokiolona marobe amin'ny indostria iray ihany, ny tsirairay dia tokony hisokatra ny sain'izy ireo, hifampianara, hifampianatra, hiara-mandroso, hanatsara ny fahombiazan'ny orinasa sy ny tombony ary hanatsara ny tombotsoan'ny mpiasa.
Tamin'ny farany dia namporisika ny rehetra i Lai Dong: “Mandrosoa ary mifalia.” Amporisiho ny rehetra hanao zavatra amin'ny fomba faran'izay mafy sy hanao tsara kokoa, mba hahafahan'izy ireo mahita ny lanjan'izy ireo manokana eo amin'ny lampihazo Lianchuang ary hahatanteraka ny nofinofin'izy ireo.
Hatreto dia vita soa aman-tsara ny fivoriana iraisan'ny telovolana fahatelo an'ny Lianchuang Technology Group. Ny fivoriana dia nandamina ny lahasa lehibe tamin'ny telovolana fahefatra ary nanazava ny drafitra stratejika sy ny tanjon'ny orinasa amin'ny 2021. Hampiasa ity fivoriana ity ny orinasa ho fotoana iray hamantarana ny tombony, hanonerana ireo lesoka, ary hanao ezaka marina hivoahana amin'ny telovolana fahefatra. Miezaha hiady amin'ny lalao famaranana amin'ny taona 2020 ary hametraka fototra mafy orina ho an'ny fiandohan'ny 2021!
Fotoana fandefasana: Oct-16-2020